Wafdi ka socda wasaarada Gaashaan dhiga Turkiga oo maanta Muqdisho ku soo wajahan. – The Voice of Northeastern Kenya
Wafdi ka socda wasaarada Gaashaan dhiga Turkiga oo maanta Muqdisho ku soo wajahan.
Wasiirka wasaarada Difaaca dalka Turkiga iyo Saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xooga dowlada Turkiga ayaa maanta ku wajahan Magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya, waxaana socda soo dhaweynta Mas’uuliyiinta ka imaanaya dalka Turkiga.
Wafdigan waxaa kamid ah Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Turkiya ,Saraakiil sare iyo madaxa Hay’adda gargaarka Turkiga ee TIKA.
Wafdigaan ayaa wada hadallo la yeelan doona Saraakiisha dhiggooda Soomaaliya,waxyaabaha la isla soo qaadi doonana waxaa ka mid ah sidii loo hormarin lahaa xiriirka ka dhaxeeya Hay’addaha amniga Dowladdaha Soomaaliya iyo Turkiga ,arimaha gargaarka ee dowlada Turkigu u fidiso dadka Soomaaliyeed iyo taageerada turkiga ee ku aadan dib u dhiska ciidanka xooga Soomaaliya.
Dowlada Turkiga ayaa kaalin wanaagsan ka qaadaneysa dib u dhiska Ciidanka Xoogga Dalka iyadoo Magaalada Muqdisho ka dhistay mid ka mid ah saldhigyada Milatir ee ugu weyn tayadiisuna aad u saraysa kaasoo lagu laylyo saraakiisha Soomaaliya .
Dufcadii ugu horaysay ee ka tirsan ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya oo isugu jirtay Saraakiil, Saraakiil xigeen, iyo qaybaha kale ee ciidan ayaa dhawaan ka qalin jabiyay xerada Tababarka turkiga waxaana sidoo kale Labada Dal dhex maray heshiisyo iskaashi ah oo dhinacyo badan leh.
← DHAGEYSO Dadkii ku barakacay dagaalada gobolka Sool oo macluul wajahaya.
Dab ka kacay suuqa Gikomba ee Nairobi →